Spotify soo muuqday mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee hal abuur bixinta geeyo music iyo podcasting. Iyadoo in ka badan 30 milyan oo songs, 60 milyan oo dadka isticmaala iyo propinquity la halyeeyada sida Taylor Swift iyo Wallach, Spotify dhagax u baarto in ay magaceeda iyo magac ku korinta. In muddo aad u gaaban, shirkadda dhigay bartilmaameedyo cusub oo noqday codsiga ugu caansan music ka dib markii Lugood. Laakiin waxaa la yidhaahdaa, ka xoog badan, yimaado masuuliyada ka badan. Saldhig taageere ee Spotify ahaa aheyn u kordhaya iyo inay sidaas yihiin iyo filayo. Markii hore, Spotify ahaa codsiga internetka ku salaysan iyo ma lahayn desktop ama macaamiisha mobile. Marka dib u jeestay saacad, waxaan arki lahaa in taariikhda taagan marag u ahaa xaqiiqada ah in aan lahayn adeeg bixiyaha online noqday horyaal in industry ee aan codsi hooyo. Sidaas darteed, dareen baahida loo qabo in la tixgeliyo laga filayo ee isticmaala, shirkadda bilaabay codsiyada hooyo kasta oo nidaamka qalliinka loo jecel yahay. Tani waxay caawisay Spotify cagaha ay si adag u badan oo suuqa dhigay. Waxaa intaa dheer, UI ee macaamiisha ay ahayd mid aad u jirrabaya, oo waxaa lagu jecel users iyo sidoo.
1. Client u Mac OS
2. Client for Windows
3. Client u Linux
4. Macaamiisha Mobile
Download music Spotify free la TunesGo aan macmiilka Spotify
Marka la eego Lugood sida ay xafiiltamaan ee ugu xooga badan, sabab ugu horeysay shirkadda ee ahaa in loo sahlo dadka isticmaala qaar ka mid ah codsiga hooyo taas oo loo adeego yaabaa bedel ah Lugood iyo sidaas Spotify macmiilka u Mac la bilaabay. Si kastaba ha ahaatee qoraalkii hore ee macmiilka Spotify ma ahaayeen sida ugu fiican ee hadda, laakiin heshiiska ayaa ahaa ku filan si ay u kordhiyaan caanka ah ee app oo uu si wanaagsan u mahadnaqayo eedeymahaas sidoo. Codsiga hooyo si uu furmo suuqa u gaar ah, kaas oo kale ma tabs ahaayeen heli karo iyo tan ku urursan diiradda on Spotify guuray users ka browser.
Geedi socodka ee macmiilka si desktop keeno ayaa la dhigay mid aad u fudud ula navigation cajiib ah. Users kaliya waxay u baahan yihiin in ay soo booqdaan, https://www.spotify.com/int/download/mac/ https://www.spotify.com/int/download/mac/. Sida ugu dhakhsaha badan page ka ​​fura, rakibayo ee version ugu dambeeyey ee Spotify bilaabo dajinta. Iyadoo dhowr qasabno in ka badan, user si fudud u arki kartaa Spotify ee ka shaqeeya uu desktop shaashadda.
Macaamiisha ayaa waxa ay ahaayeen kuwo la socon kara oo dhan versions of Mac OS, oo ay ku jiraan Libaaxa, Yosemite laakiin sanadkii 2012, shirkadda ka baxeen taageero u version hore ka badan 10.5.
Nidaamka qalliinka labaad ee ugu qiimeeyo kadib markii Mac waa Windows. Si Korka dareenka dadka isticmaala Windows, Spotify ay macmiilka eryay oo dhan versions of Windows (XP, Vista, 7). Sida dadka isticmaala Windows aan la isagoo codsiga wax geeyo music sida Lugood, Spotify ma la kulmaan dhibaato badan ee ay ku abuureen laftiisa iyaga ka mid ah. Fududahay in la soo baxdo iyo rakibi macmiilka hooyo ee Spotify waxaa soo dhaweeyey oo dadka isticmaala Windows. Waxaa intaa dheer, iyada oo uu macaamilka ilaalinta lacag la'aan ah, Spotify ku xiran tiro badan oo ah dadka isticmaala.
Si aad u hesho macmiilka Spotify ah Windows, mid u baahan yihiin inay raacaan tallaabooyinka la mid ah, sida in Mac. Booqo https://www.spotify.com/int/download/windows/ , oo kala soo bixi rakibayo. Marka u samayn, macmiilka noqon doonaa codsi ah in aad mashiinka. Macmiilka desktop waa la heli karo oo dhan versions of Windows ay ka mid yihiin Windows 8. Si kastaba ha ahaatee app hooyo ee Spotify aan la heli karin Windows 8 ie mid iyocadhadii hesho dukaan Windows.
Spotify ma kasta oo macmiilka heegan ah ma keenaan Linux, laakiin macmiilka mid ka mid ah Windows waa la isticmaali karaa Linux iyagoo khamri. In erayada fudud, Khamri loo fahmi karaa emulator ah (inkastoo Khamri u taagan tahay Khamri ma aha Emulator ah). Waxay bixisaa lakabka waafaqsan in uu sameeyo codsiyada Windows harsan Linux ah. Sida Linux, Khamri sidoo kale waa utility il furan.
Si taxdir leh oo xoog badan suuqa, waa mid ka mid is ogow of qalabka gacanta qabtay. Spotify hayaa isku maan iyo macaamiisha u keenay oo dhan viz nidaamka qalliinka mobile. Android, Windows, Black Berry, macruufka iwm Codsiga hooyo ee Spotify Waayo, kuwaas oo nidaamyada hawlgalka waxaa laga heli karaa suuqa kala ah (tusaale ahaan. Play Store, App World iwm) iyo xor u yihiin inay soo dejisan. Laga soo bilaabo June 2012, Spotify sameeyey music ka hoorto lacag la'aan ah iPad iyo iPhone. Waxaa intaa dheer, Spotify sidoo kale loo ogol yahay cid saddexaad si ay u abuuraan macmiilka xisbiga saddexaad (sida. Despotify) iyo in la horumariyo taageero iyaga u.
Dhamaan macaamiisha kuwaas oo si wadajir ah ugu baaqay in dadka isticmaala Dhaba in sumcadda Spotify.
> Resource > Spotify > Spotify Client for Windows Mac Linux iyo macruufka iyo Android